Xiddig ka tirsan Arsenal oo heshiis labo sanadood ah la gaaray koox ka dhisan dalka Spain – Gool FM
(London) 25 Agoosto 2019. Sida wararku ay sheegayaan xiddig ka tirsan kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa heshiis labo sanadood ah la gaaray Naadi ka dhisan dalka Spain.
Daafaca kooxda Arsenal ee Nacho Monreal ayaa la warinayaa inuu qarka u saaran inuu dhammeystiro u dhaqaaqista kooxda reer Spain ee Real Sociedad.
33-sano jirkaan garabka bidix ee daafaca ka dheela ayaa in ka badan 180 kulan ciyaaray horyaalka Premier League tan iyo markii uu Gunners kaga soo biiray Naadiga Malaga bishii Janaayo ee sanadkii 2013-kii.
Wadahadallada u dhexeeya labada kooxood ayaa si wanaagsan u socda sida laga soo xigtay Jariiradda Marca, iyadoo la filayo in xiddiga reer Spain uu u saxiixo kooxda ka dhisan dalkiisa heshiis labo sano ah dabayaaqada Isbuucaan.
Kooxda The Basque ayaa la filayaa inay qiimo yar ka siiso Arsenal daafacii hore ee naadiga Osasuna, kaasoo qiyaar uga heli doona sanad saddexaad San Sebastian haddii uu ciyaaro kulamo ku filan xilli ciyaareedka 2020-2021.
Monreal ayaa ku soo bilowday dhammaan saddexdii kulan oo ay Arsenal ciyaartay horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan oo uu ku jiro kulankii ay guuldarrrada 3-1 kala soo kulmeen xalay kooxda Liverpool oo ay booqdeen.